Ebe nchekwa ihe eji eji diski Duf - Enwere ike Linux
Utility iji diski Duf
Mba, ọ bụghị biya Duff ma ọ bụrụ na nke ahụ na-ada mgbịrịgba. Taa, anyị na-ekwu maka Utility Duf disk, isi mmalite, free "Disk Usage Free Utility" nke edere na Goland ma wepụta ya n'okpuru ikike MIT. Ngwa diski na-akwado ọtụtụ nyiwe dị ka BSD, Linux, macOS na sistemụ arụmọrụ Windows. Duf bụ akụrụngwa iwu-akara…
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Utility iji diski Duf
Tọzdee, Ọktoba 7, 2021 Sunday, June 6, 2021 by Jọshụa James
Mba, ọ bụghị biya Duff ma ọ bụrụ na nke ahụ na-ada mgbịrịgba. Taa, anyị na-ekwu maka Utility Duf disk, isi mmalite, free "Disk Usage Free Utility" nke edere na Goland ma wepụta ya n'okpuru ikike MIT. Ngwa diski na-akwado ọtụtụ nyiwe dị ka BSD, Linux, macOS na sistemụ arụmọrụ Windows. Duf bụ…
Categories Ubuntu Tags Utility iji diski Duf, Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa